I-Adobe ipapasha ikhamera ye-Photoshop kwi-Android kunye ne-iOS | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo, Ezahlukeneyo
Besilindele i Inguqulelo yokugqibela yeKhamera yeAdobe Photoshop kuba besinethuba lokuvavanya i-beta. Uhlelo lokusebenza lokuphinda usebenzise kwakhona usebenzisa iAdobe Sensei, itekhnoloji yeAdobe yeArtificial Intelligence kwaye ifezekise iziphumo ezigqwesileyo zazo zonke iintlobo zeefoto.
Ngale mini I-Adobe ipapashe usetyenziso kwi-Android nakwi-iOS zombini, ke abasebenzisi baya kuba nesoftware yasimahla yokuqaqambisa ezo zithombe bazithathayo ngokuhamba kwazo. Inguqulelo 1.0 ikhutshiwe kunye neziphumo ezitsha zokuphucula ngokomgangatho iifoto esizithathayo nee-mobiles zethu.
Ikhamera ye-Adobe Photoshop isebenzisa izixhobo zasekhaya zeselfowuni, ke ufuna i-smartphone elungileyo ukuze "ulahle", kuba ukuba ayisebenzi intsebenzo ayinakulunga. Inyaniso kwiinguqulelo zokuqalaNokuba kwisiphelo esiphakamileyo njengeNqaku10 leSamsung, ibingahambi kakuhle ngendlela ebesingathanda ngayo.
Ewe, kwinguqulo 1.0 sele ikho sinelo nqanaba lokusebenza ukonwabela ngokupheleleyo iziphumo zalo ezahlukeneyo. Ngendlela, zimbalwa ezizayo ezizayo ukuze sikwazi "ukuphinda sisebenzise" ezo foto ziza kuthi zibabaze kakhulu xa sizigqithisela kuthungelwano lwentlalo kunye nokusetyenziswa kwemiyalezo.
Umsebenzi we-Adobe kukubeka zonke iintlobo zabaphuhlisi, nangona kuyinyani oko abo bafaka umxholo ophezulu Iya kuba sisixhobo esibalulekileyo, usetyenziso olunokuphucula ngokufanelekileyo iifoto zakho. Kwaye inyani yile yokuba sinokuphantse sithi yeyona app ilungileyo yokuhluza. Ngoku kuhlala kuyilo ngakumbi ukuba abayili abaninzi bajoyine ekwenzeni iifilitha ngeAdobe Sensei Artificial Intelligence kwaye banokunika abasebenzisi inani elikhulu lokucoca ukongeza iifoto zabo kuthungelwano.
Ukufika okupheleleyo kwe Ikhamera ye-Adobe Photoshop kwaye sele ufumanekile kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwiivenkile zazo zenza amagama ambalwa adibeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » I-Adobe ikhupha i-Photoshop Camera kwi-Android nakwi-iOS
Iimuvi ezili-10 kunye nothotho luzele ubuchule obungenakuphoswa